Kuzofiwa kweyeNedbank Cup | News24
Kuzofiwa kweyeNedbank Cup
PHOTO:backpagepix Umdlali weMaritzburg United uPhilani Zulu okulindeke ukuba asize iqembu lakhe linqobe njengoba lizobe libhekene neMpumalanga Black Aces ekuhambeni ngoMgqibelo.
UKWENZA kuzothi ukushintsha kule mpelasonto njengoba amaqembu amaningi ezobe enephuzana emidlalweni yeNedbank Cup.
Mhlawumbe imidlalo yalo mqhudelwano izoke ithi ukuthoba abalandeli bebhola bakuleli amanxeba ngoba phela umkhankaso we-2017 African Nations Cup weqembu lesizwe, iBafana Bafana phela ayikafuni ukucaca kahle-hle.
Imidlalo edlalwe yiBafana Bafana neCameroon ekuhambeni (2-2) nasekhaya (0-0) eThekwini) ishiye imibuzo eminingi kubalandeli bebhola laseMzansi, bezibuza ukuthi kaze ngonyaka ozayo siyaya yini kwi-2017 ACN.
Uma sibuyela kwimiqhudelwano yasekhaya, imidlalo yeNedbank Cup edume nge“Ke Yona” izobe ithe chithi saka izwe lonke. Le midlalo izoqhubeka ngoLwesihlanu lwakusasa. Kuzokhumbuleka ukuthi imidlalo yalo nqhudelwano ivamise ukuwaxaka amaqembu amakhulu akwiPSL, kahle-kahle ofishi abancane bavamise ukudla abakhulu.
Kuzokhumbuleka imigilingwane nezimanga ezenziwa yiBaroka FC neFET Maluti College eminyakeni embalwa edlule. Okubuye kuthuse ofishi abakhulu abakwiPSL ukuthi laba bhemu beBaroka FC basekhona kulo mqhudelwano. Ushikishi luzoqala e-Old Peter Mokaba ngoLwesihlanu lapho ezinye zezikhokho zePSL iBidvest Wits izobhekana khona neMagesi FC.
Umqeqeshi weziTshudeni uGavin Hunt uthi iqembu lakhe angeke liyithathe kancan iMagesi FC. Uyavuma futhi ukuthi le njejane encane ivamise ukuba yinkinga kumaqembu amakhulu akwiPSL.
“Emidlalweni yezinkomishi njengeNedbank Cup, alikho iqembu elincane futhi wonke umuntu uyinkinga futhi kungenzeka noma yini. Thina sizodlala nabo njengeqembu elikwiPSL futhi sizimisele ngokunqoba ukuze siqhubekele phambili kulo mqhudelwano. Thina asinalo iqembu esilithatha ngokuthi lincane noma likhulu, sihlonipha wonke amaqembu,” kusho uHunt.
Kanti okunye okuthokozisayo ukuthi womabili amaqembu aKwaZulu-Natal, iMaritzburg United neLamontville Golden Arrows asekhona kwiNedbank Cup.
ITeam of Choice yona izobhekana neMpumalanga Black Aces ekuhambeni kwaNyamazane Stadium eMpumalanga ngoMgqibelo ngo-3 ntambama.
Okhulumela iTeam of Choice uBrian Zuma uthi kulezi nsuku awukho umdlalo olula nongeke wanakwa ngoba ukuwina kungagqugquzela abadlali ukuthi bafune ukushaya kwasani baze bakwazi ukulivika nezembe.
Kanti ama-Arrows amahle wona azobe enephuzana, nalezozi fanyana eziyinkinga iBaroka FC ngeSonto eChatsworth Stadium.
Kanti imidlalo yeNedbank Cup isiyonke imi kanje:
IMagesi FC ne Bidvest Wits e-Old Peter Mokaba Stadium ngo-8 ebusuku
IPlatinum Stars ne Polokwane City eRoyal Bafokeng
Stadium ngo-3 ntambama, iBlack Aces ne Maritzburg Utd Kanyamazane Stadium ngo-3 ntambama, iMamelodi Sundowns ne Mbombela United eLucas Moripe
Stadium ngo-8: 15 ebusuku, iSantos ne Free State Stars e-Athlone Stadium ngo-8:15 ebusuku
15:00 IJomo Cosmos ne Orlando Pirates e-Olen Park Stadium ngo-3 ntambama, Golden Arrows ne Baroka FC eChatsworth Stadium ngo-3 ntambama
SuperSport United ne University of Pretoria eLucas
Moripe Stadium ngo-7:30 ebusuku.